Shiinaha saafiga ah iyo dabeecadda menthol crystal / L-menthol 99% oo leh qiimo wanaagsan cas 2216-51-5 warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | Aragtida
Magaca Kiimikada: L-menthol, crystal menthol
Qaaciddada Molecular: C10H20O
Daahirnimo: 99% min
Mentholwaxaa lagu sameeyaa caleemo, maaddada ugu muhiimsan ee saliida basbaaska, waana mid ka mid ah monoterpenes meertada ah. Waa saliid aad u kacsan oo muhiim ah oo ay soo saaraan dhirta, oo inta badan ka kooban hemiterpene, monoterpene iyo sesquiterpene, gaar ahaan cimilada diiran. Qaar ka mid ah midabbada dhirta muhiimka ah waa terpenoids ama iskudhisyo ay ku jiraan kooxo terpenoid ah.
L Menthol Crystal way qaboojineysaa, qaboojineysaa, waxayna leedahay caraf udgoon udgoon fiican leh. Waxaa badanaa loo isticmaalaa waxyaabaha la isku qurxiyo, salves, balms, kareemada daawada leh, lozenges-ka cunaha, daawada cadayga, dawada afka, ciridka, buufinta cagaha, xanuun joojinta ama qaboojinta alaabada jirka, shaambo, qaboojiyaha, dharka, kareemada xiirashada, afka ama cunaha lagu buufiyo, isku-buufinta, daawada saliidaha, iyo jel qaboojinta. Kiristaalo Menthol ah ayaa ku fiican isticmaalka alaabtan si ay uga caawiso yareynta murqaha iyo xanuunka, qufaca, ciriiriga, hargabka, iyo dhibaatooyinka neef mareenka sare. Maaddaama kristantarrada 'Menthol' ay aad isugu urursan yihiin, kaliya qaddar aad u yar ayaa looga baahan yahay alaabta gudaheeda. Markaad iibsanayso kiristaalo 'Menthol crystals' xusuusnow in macalufka 'menthol crystal' oo tayo wanaagsan leh inta badan ay ku jiraan wax aan ka yarayn 99.4% menthol
1.Menthol wuxuu saameyn ku leeyahay caabuqa isha, cunaha oo xanuunta, boogaha afka;
2.Menthol waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo jadeecada rubella; raaxo la'aanta dareenka jahwareerka laabta iyo gobollada hypochondriac;
3.Menthol wuxuu leeyahay shaqo madax xanuun ku dhaca hargabka, infekshinka sare ee neef mareenka iyo cudurada kale ee qandhada ee faafa ee marxaladda dhalmada
1kg / bac, 25kg / kartoon
muraayad aan dabiici ahayn oo midabkeedu yahay, oo leh ur ur miridh ah
Hadhaaga aan xasillooneyn,%
1g muunad ku milmi kara 5ml 90% ethanol
Tijaabinta sheygan sida ku cad <Pharm.standard> Kaydinta: ku hayso meel qabow, qalalan oo hadh leh.
100% Alpha Pinene Dabiiciga ah oo Saafi ah Bulk CAS 7785-26-4
Hore: Warshadu waxay siisaa daahir iyo dabiicada Citral CAS 5392-40-5
Xiga: Saafi iyo Dabiici laga soosaaray saliid saliid geed geedo shaah badan
fasalka pharmaceutic dabiici ah oo saafi ah Borneol / D ...
Factory bixiyaan fasalka sare 95% Phytol ee dabiiciga ah w ...